Photovoltaic Solar Energy - Fanavaozana Maitso | Green Renewables (Pejy 2)
Ny bateria mandeha amin'ny herin'ny masoandro dia tonga lafatra amin'ny fampiasana angovo avy amin'ny masoandro rehefa tsy avela hateraky ny fepetra. Ianaro ato daholo ny momba azy ireo.
Ny charger solaires dia fitaovana revolisionera tanteraka izay miasa amin'ny angovo azo havaozina. Midira eto hahalala ny momba azy rehetra.
Toetra mampiavaka, fiasa ary takiana jiro amin'ny masoandro
Ianaro ny fomba fiasan'ny jiro amin'ny masoandro, famoronana revolisionera izay hita miharihary amin'ny tanàna. Te hahafantatra bebe kokoa momba izany ve ianao?
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny angovo azo avy amin'ny masoandro photovoltaic, ny fomba famokarana azy ary ny fampiasana azy. Te hianatra ny zava-drehetra momba an'ity lohahevitra ity ve ianao?
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny toetran'ny inverter ankehitriny sy ny fomba fampiasana azy amin'ny fametrahana masoandro. Te hahafantatra bebe kokoa ve ianao?
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny toetra mampiavaka ny kitapo masoandro sy ny tombony omen'ny fametrahana azy. Te hahafantatra bebe kokoa momba izany ve ianao?
Toeram-pamokarana herinaratra avy amin'ny masoandro mitsingevana voalohany any Netherlands
Miorina any Holandy ny toby famokarana herinaratra mitsingevana, ny angovo vokarin'ny masoandro dia 15% mihoatra ny azo avy amin'ny zavamaniry tanety tanety an-tany ary handrakotra ny 75% -n'ny fangatahan'ny angovo eto amin'ny firenena.
Ny Nestlé dia hanatevin-daharana ny lisitry ny multinationals izay manolo-tena amin'ny fanavaozana ny zava-maniry ao Etazonia. Inona ireo orinasa hafa manolo-tena amin'ny fanavaozana? Inona no loharano azo havaozina ampiasainy? Aiza ny zavamaniry?
Taorian'ny taona vitsivitsy nahatsiravina fanavaozana noho ny fanapahana nataon'ny antoko malaza dia toa miverina mampanjariaka vola amin'ny fanavaozana indray ny zanabola, indrindra ny photovoltaics. Inona no anton'izany?
Noho ireo varotra 3 mega natao tamin'ny taona 2016 sy 2017, dia afaka mahatratra 20% amin'ny famokarana azo havaozina i Espana amin'ny taona 2020. Iza amin'ireo vondrom-piarahamonina iza no mpitondra? Iza avy ireo firenena efa nihoatra io 20% io?
Pamplona dia nanolotra drafitra angovo, tapitrisa tapitrisa euro no hatokana hampiroboroboana ny fanjifana tena, ny fanatsarana angovo ary ny fitsitsiana angovo. Inona avy ireo refy azonao ary iza no handray soa?
Raha tsy manimba azy io ny politika, dia hofoanan'i Chile ireo toby famaritana arintany mandritra ny folo taona ho avy, raha ny marina, tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nampitombo ny heriny havaozina izy io. Inona no angovo lehibe indrindra? Ahoana ny fahitanao ny ho avy?
Efa mahazo tombony ve ny angovo azo havaozina?
Ny tsenan'ny angovo eran'izao tontolo izao dia niova nandritra ny fotoana elaela, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nahatratra teboka lehibe sarotra resahina izy ireo. Efa misy tombony ve ny angovo azo havaozina tsy misy fanampiana ary aiza no mora kokoa?
Any Espana isika amin'izao fotoana izao, tsy toy ny firenena eropeana hafa toa an'i Portugal, dia mahatratra 17% amin'ny famokarana azo havaozina ihany isika. Mba hanovana izany dia niteraka varotra 3 ny fanjakana tamin'ny taon-dasa, ary mamaly tsara ny orinasa ary te-hiditra amin'ny lamasinina azo havaozina.
Tao anatin'ny taona vitsivitsy dia nihena tamin'ny fomba tsy nampino ny vidin'ny angovo avy amin'ny masoandro. Oviana izy ireo no nihena raha oharina amin'ny angovo hafa? Inona no tena vidiny? Iza amin'ireo firenena no miloka amin'ny fanavaozana?
Ecocat, ny catamaran Espaniôla voalohany miasa amin'ny angovo avy amin'ny masoandro
Ity lahatsoratra ity dia miresaka momba ny toetra mampiavaka ny Ecocat, ny catamaran Espaniôla voalohany niasa tamin'ny angovo avy amin'ny masoandro. Te hahafantatra ny fomba fiasany ve ianao?
Ny entona maintso an'ny masoandro dia afaka mamokatra angovo sy mamboly
Ny entona maintso an'ny masoandro dia karazana teknolojia marani-tsaina afaka mamokatra angovo avy amin'ny masoandro sy mitombo ny voly amin'ny fotoana iray. Te hahafantatra momba azy ireo ve ianao?
Namerina herinaratra tany amin'ny hopitalin'ny ankizy iray tany Puerto Rico i Tesla
Tesla dia manampy an'i Puerto Rico hiverina amin'ny ara-dalàna aorian'ny rivodoza 2 tamin'ny volana septambra. Aiza no apetraka ny panneaux solaires?
Ny elatra lolo mainty dia mampitombo ny fahombiazan'ny selan'ny masoandro
Ny fandinihana natao dia nahatsikaritra fa ny elatry ny lolo mainty dia afaka mampitombo ny fandraisan'ny sela masoandro hatramin'ny 200%.
Ny premiums ho an'ny havaozina dia hofoanana any Aostralia, hampihena ny vidin'ny herinaratra avokoa. Iza no manohana an'io fepetra io?
Ny angovo avy amin'ny masoandro no mpitarika ny fanavaozana ny taon-dasa, noho ny vidiny ambany ihany ve izany? Inona ny hoaviny sy ny hoaviny?
Ny mety ho vokatry ny fitarainana momba ny fanapahana ny fanavaozana
Efa misy mihoatra ny 30 ny arbitrations manohitra an'i Espana amin'ny fikambanana samihafa, fa ny mpampiasa vola vahiny ihany no afaka manatona azy ireo, inona no ho vokany?
Ny Fitsarana Tampony dia manohy manemotra ireo mpampiasa vola izay mitaky ny fanapahana ny fanavaozana azo havaozina, etsy ankilany, nifanaraka tamin'izy ireo ny ICSID.
Ny hetran'ny henatra, ny reharehan'i Espana
Ny hetra mahamenatra, isika irery no firenena misy hetra amin'ny masoandro. Inona no ahitana azy? Lazainay aminao ny fiantraikan'izany aminao, inona ny vidiny?
Ny zavamaniry mafana lehibe indrindra eto an-tany dia honina ao Aostralia, inona ny heriny? tombony sy fatiantoka? manao ahoana ny asany, ary ohatrinona ny vidiny?
Lazainay aminao ny zava-drehetra momba ny Tesla Powerwall 2, ny taranaka faharoa amin'ny bateria Tesla. Inona no tsy itovizany amin'ilay maodely teo aloha?
Izy ireo dia mamorona panneaux solaires izay miasa amina insolation ambany
Ny mpahay siansa sinoa dia namorona tontonana masoandro izay afaka mamokatra herinaratra amin'ny andro rahona, amin'ny orana, zavona, na amin'ny alina aza.
Manomboka mihodinkodina any India ny lamasinina Hybrid misy panneaux solaires
Mandeha fitaterana olona 23 tapitrisa sy entana 2,65 tapitrisa taonina isan'andro ny lalamby Indiana. Io haben'ny isa io dia mitaky fanovana maodely
Ny vidin'ny angovo avy amin'ny masoandro dia hidina 27% amin'ny 2022
Ny vidin'ny fametrahana angovo azo avy amin'ny masoandro sy ny fampiasam-bola dia hitohy hihena hatramin'ny 27% amin'ny 2022.
Ny sehatry ny fambolena dia mifantoka amin'ny angovo 25% amin'ny herin'ny masoandro
Ny sehatry ny fambolena sy ny fanondrahana dia efa mifantoka amin'ny 25% ny toby famokarana herinaratra mandeha amin'ny herin'ny masoandro photovoltaic ho an'ny fividianana tena
California dia mamokatra angovo masoandro be loatra
Angovo avy amin'ny masoandro be loatra no vokarin'i California ka tsy maintsy mandoa fanjakana mifanakaiky aminy izy ireo mba hisitraka ny ambim-bavany.
Ahoana ny fampihenana ny vidin'ny fametrahana angovo azo avy amin'ny masoandro
Ny iray amin'ireo lesoka amin'ny filokana amin'ny angovo azo havaozina dia ny vidin'ny fampiasam-bola avo lenta ananan'izy ireo. Ezahina ahena ny vidiny.
Mitovy ve ny fividianan-tena any amin'ny firenena eropeana rehetra?
Ny fanjifana tena dia eken'ny EU ho iray amin'ireo singa manan-danja indrindra amin'ny fanjifana angovo. Moa ve mitovy amin'ny firenena rehetra?
Ny governemanta dia tsy vonona hitazona ny 'tombom-barotra azo antenaina' ankehitriny, amin'ny faran'ny vanim-potoana voalohan'ny lalàna 2014-2019 dia hampihena ny vidiny voalohany
Ny angovo azo havaozina dia miteraka asa kalitao marobe. Ny sehatra dia mampiasa olona marobe any Etazonia noho ny gazy, solika ary arina atambatra.
Ny tsenan'ny angovo eran'izao tontolo izao dia niova tsy tapaka nandritra ny fotoana elaela, saingy tamin'ity indray mitoraka ity dia nahatratra teboka lehibe sarotra resena izy ireo.
Dewa dia nanambara ny vidiny ambanin'ny 10cts an'ny consortium izay misafidy ny dingana fahefatra an'ny 200 MW an'ny Mohammed bin Rashid CSP.
Ny CNMC dia nanaiky ny megaproject an'ny Mula fotovoltaic solar plant, raha vantany vao voamarina ny fahafaha-manao ara-bola an'ny vondrona Alemanina Juwi.
Nolavin'i Espana ny Masoandro: fanjifana tena sy fampiroboroboana
Nolavin'i Espana ny filan'ny masoandro sy ny masoandro, ka mahatonga ny olom-pirenena handoa bebe kokoa amin'ny faktiorany amin'ny herinaratra. Tsy miloka amin'ny angovo avy amin'ny masoandro ny governemanta.
Espaina dia manangona fitarainana 27 farafahakeliny any amin'ireo fikambanana iraisam-pirenena toa ny ICSID. Ny fitakiana dia mitontaly 3.500m, na dia mahatratra 6.000 aza izy ireo.
Mba hamaritana izay nateraky ny angovo azo havaozina, ny International Energy Agency dia nanao fifandanjana tamin'ny taona 2016.
Very ny arbitration international voalohany an'i Espana noho ny fanapahana ny fanavaozana
Espaniola dia namoy ny voalohany tamin'ny fifampiraharahana iraisam-pirenena talohan'ny ICSID, noho ny fanapahana natao hatramin'ny 2010 mba hanampiana ny angovo azo havaozina